यी हुन् एमालेका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार
कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं, कार्तिक ३, २०७४
नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले पहिलोचरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारको नाम तय भएको छ । बैठकले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) को संयुक्त कार्यदलको प्रस्ताव तथा पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णय अनुसार दुई पार्टीबीच भएको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटलाई अनुमोदन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रायजसोको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटका लागि ४९ वटा राजनीतिक दलले असोज २९ गते आयोगमा उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यस्तै, प्रदेशसभा तर्फ ७ वटै प्रदेशको जोड्दा ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।
नयाँ वर्ष नेपाल संवत् ११३८ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । बाजागाजा र सांस्कृतिक झाँकीसहितको ‘न्हुँदया भिन्तुना’ पदयात्रा निकाली विशेष रुपमा नयाँ वर्ष मनाइएको छ । राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाले विसं ९३७ (इ सं ८०२) मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल संवत्को शुरुआत गराएका थिए ।
‘बिट क्वाइन’ बाट अवैद्य आर्थिक धन्दा कसरी हुन्छ ?
भरतपुरमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु
नेपाल संवत् मौलिक पहिचानः अध्यक्ष ओली
नारायणी नदीमा दाजुभाइ बेपत्ता, धादिङमा पनि बालकलाई नदीले बगायो
पटका पट्काउँदा निस्केको झिल्कोले आगलागी, ५० लाख बराबरको क्षति
गणेश राई, आश्विन २६, २०७४
यसरी नयाँ बन्दै छ लाप्राक
गंगा बीसी, आश्विन २५, २०७४
विनोद पाण्डे, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठआश्विन २५, २०७४
प्रशान्त माली, आश्विन २२, २०७४
दुर्गमको सुगम पुस्तकालय
विद्या राई, आश्विन १९, २०७४
विमल खतिवडा, आश्विन १०, २०७४
तिहारको शुभकामना [सम्पादकीय]
सम्पादकीय, कार्तिक ३, २०७४
तिहार सुरु भएको छ । त्रयोदशीकै दिनदेखि तिहार हुने भए पनि औंसीका दिन (यसपालि बिहीबार) बाट यसको रौनक बढ्छ । दसैं सकिएको दुई सातामा आउने चाड तिहार दसैंजत्तिकै उत्साह र उमंगका साथ मनाउने गरिन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना सत्ता स्वार्थले चलायमान देखिन्छन् । दुई ठूला भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीले अब हुने प्रदेश र संसदीय चुनावमा तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म पुग्ने बाटो तय गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
सरकारले जारी गरेको नेपाल पर्यटन रणनीतिले सन् २०२५ सम्म वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
कुनै पनि नीति वा विषय विवादमुक्त हुँदैन । यसका असल र खराब दुुवै पक्ष हुन्छन् । खराब पक्षलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्लद्वितीयासम्मका ५ दिनलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ । यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाका घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी ५ दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल होस् अथवा अन्य दलहरूले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरुन्, चुनावी अभ्यासका क्रममा यस्ता घटनालाई सामान्य र स्वाभाविक रूपमा लिनु र लिइनुपर्ने हो । पूरा पढ्नुहोस्
नेपाली कांग्रेस सदा यो भ्रममा बाँचेको छ कि ऊ छ र यो मुलुकमा लोकतन्त्र छ । अर्थात लोकतन्त्र र ऊ एकअर्काका पर्याय हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
सम्पादकीय, कार्तिक २, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारहरूको मनोनयन भइसक्दा पनि चुनावी सुनिश्चितताका विषयमा कतिपय कोणबाट संशय व्यक्त भइरहनु उचित होइन । पूरा पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलियामा तिहारको अलग रौनक
नारायण खड्का, कार्तिक ३, २०७४
नेपाली बालबालिकालाई नेपाली भाषा सिकाइरहेको नेपाली पाठशालाले दुईदिनअघि देउसी भैलो खेल्न सुरु गर्‍यो । त्यस्तै नेपालमा बिद्यालय निर्माण गरिरहेको बोटल फर स्कुलले पनि सहयोग संकलनकै लागि देउसी भैलो खेलिरहेको छ ।
श्रीमतीको ज्यान लिन खोज्ने भूपू गोर्खालाई १४ वर्षको जेल सजाय
नवीन पोखरेल, कार्तिक २, २०७४
ब्रिटिस अदालतले आफ्नै श्रीमतीको ज्यान मार्ने उद्योग गरेकोमा एकजना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई १४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
जोर्डनसँगको श्रम सम्झौता जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ : श्रममन्त्री
होम कार्की , कार्तिक २, २०७४
श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले जोर्डनसँग भएको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न दुवै सरकार अग्रसर हुने बताएका छन् ।
एनआरएनए प्रवक्तामा भूषण घिमिरे
कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक १, २०७४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रवक्तामा भूषण घिमिरे नियुक्त भएका छन् । संघको बुधबार बसेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बैठकले घिमिरेलाई प्रवक्तामा नियुक्त गरेको हो । घिमिरे जापानमा सञ्चारसहितका उद्यम क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ३१, २०७४
कृष्ण आचार्य, -शेखर अधिकारी, आश्विन ३१, २०७४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा भवन भट्ट विजयी भएका छन् । काठमाडौंमा भएको आठौ महाधिवेशमा प्रत्यासी जमुना घले गुरुङलाई भारी मत अन्तरले हराउँदै भट्ट विजयी भएका हुन् । उनले ११ सय ९७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
एनआरएनए अध्यक्षमा भट्ट र गुरुङको उम्मेद्वारी दर्ता
कृष्ण आचार्य, आश्विन ३०, २०७४
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी कार्यकालको अध्यक्ष पदमा हालका उपाध्यक्ष भवन भट्ट र आइसीसी सदस्य जमुना गुरुङ (घले) बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
पीडितका नाममा जापानमा आफूखुसी राहत रकम संकलन
प्रकाश पन्थी, आश्विन २९, २०७४
नेपालमा बाढी र पहिरोका कारण घरबार गुमाएका तराईवासीको दिनचर्या यतिबेला सामान्य बन्दै गएको छ । जापानमा उनीहरुका नाममा सहयोगका लागि भन्दै पैसा उठाउने क्रम अझै जारी छ । आइतबार मात्रै नेपाली सेवा समाज गिफुले एक लाखभन्दा बढी जापानीयान उठाएर धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशनमार्फत बाढीपीडितलाई पठाएको जनायो ।
एएफपी, कार्तिक ३, २०७४
ओलिभिएर जिरुडले अन्तिम समयमा गोल गरेपछि आर्सनलले रेड स्टार बेलग्रेडलाई १-० ले पराजित गरेको छ । युरोपा लिग अन्तर्गत बुधबारको खेलमा घरेलु टोली १० खेलाडीमा सिमित हुँदा आर्सनलले त्यसको फाइदा उठायो । पूरा पढ्नुहोस्
आधा उमेर फुटबलमै
पूर्वखेलाडी पूर्ण सुब्बालाई सम्मानित गरिँदै ।तस्बिर : पर्वत/कान्तिपुर
पर्वत पोर्तेल, कार्तिक ३, २०७४
पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी पूर्ण सुब्बाको उमेर ४३ पुग्यो । यिनले आफ्नो आधाभन्दा वढी उमेर फुटबलमै बिताए । ‘ढुंगा पचाउने’ उमेरमा देशका लागि धेरै खेले । तर, खेलजीवनको उत्तराद्र्धमा फुटबललाई चटक्कै माया मारेर विदेसिनु पर्‍यो । पूरा पढ्नुहोस्
आयोजक धाइजन–चारआली भेट्रान फुटबल क्लबले सुरुंगा भेट्रान क्लबलाई ३–० ले पराजित गर्दै पाँचौं जिल्लास्तरीय भेट्रान फुटबलको ट्रफी जितेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
डच फुटबलको पीडा
विश्वकप छनोटअन्तर्गत स्विडेनविरुद्ध खेलेपछि नेदरल्यान्ड्सका खेलाडी मैदान बाहिरिँदाको क्षण । फाइल तस्बिर : रोयटर्स
सन् २०१८ को विश्वकपमा छनोट हुन नसकेपछि एकपल्टको विश्व फुटबल महाशक्ति नेदरल्यान्ड्सका समर्थकले यो पीडा अझै भुल्न सकेका छैनन् । पूरा पढ्नुहोस्
चार महिला बक्सर थाइल्यान्डतिर
एसियन वुमन बक्सिङ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली महिला बक्सिङ टोली बिहीबार थाइल्यान्ड गएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
इमामको डेब्यूमै शतक
युवा ओपनर इमाम उल हकले डेब्यूमै शतक बनाएपछि पाकिस्तानले तेस्रो वान डेमा बुधबार श्रीलंकालाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ । यो जितसँगै पाकिस्तानले ५ खेलको सिरिजमा ३–० को अग्रता बनाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
च्याम्पियन्स लिग फुटबल : ठूला टोलीलाई सफलता
च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत चेल्सीका मार्कस अलोन्सो र एएस रोमाका बु्रनो एयर बलका लागि जुध्दै । तस्बिर : रोयटर्स
युरोपेली च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत बुधबार म्यानचेस्टर युनाइटेड, बार्सिलोना, पेरिस सेन्ट जर्मेन, बायर्न म्युनिख र युभेन्ट्सले सफलता हात पारेका छन् । चेल्सीले भने घरेलु मैदानमा एएस रोमासँग ३–३ को बराबरीमा राकिनुपर्‍यो । पूरा पढ्नुहोस्
मेसीको सयौं युरोपेली गोल
एएफपी, कार्तिक २, २०७४
लियोनल मेसीले आफ्नो सयौं युरोपेली गोलको उपलब्धी हात पारेपछि च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनाले बुधबार राति ओलम्पियाकोजलाई ३–१ ले हराएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
बिदा मनाउन अन्नपूर्ण फेदी
दीपक परियार, कार्तिक ३, २०७४
स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत काठमाडौं बानेश्वरका विशाल रेग्मी परिवारसँग दसैं मनाइसकेपछि फुर्सदिलो भए । कतै घुम्न जान मन लाग्यो । पोहोर मुस्ताङ पुगेका उनलाई यो वर्ष मनाङ जाने रहर थियो । साथीहरूसँग सल्लाह गरे ।
घोडेपानीमा खचाखच पर्यटक
घनश्याम खडका, कार्तिक ३, २०७४
अन्नपूर्ण पदमार्गको उत्कृष्ट गन्तव्यमध्येको एक मानिने पुनहिलका सबै होटल र गेस्टहाउसहरू पर्यटकले खचाखच छन् । घोडेपानीबाट पुनहिलसम्म पुग्ने बाटो र भ्यु प्वाइन्टमा आराम कुर्सी राख्नेसमेतका पूर्वाधारहरू थप गरिएपछि पर्यटक थप आकर्षित भएका हुन् ।
पैयुँ हुवासकी अम्बिका शाहलाई तीन वर्षअघिसम्म श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको रकम लिन स्याङ्जाको वालिङ वा सदरमुकाम कुस्मा पुग्नुपथ्र्यो । बजार पुगेर एक्लै पैसा लिएर फर्कन डर भएपछि मेसो मिलाएर साथीसँग बजार पुगेर फर्कन ३ दिन बित्थ्यो ।
औद्योगिक व्यवसया ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालन, उत्पादन वा कारोबारमा नआएका उद्योगलाई म्याद थप गर्न सरकारले तीन महिनाको समय दिएको छ ।
सन्तोष सिंह, कार्तिक ३, २०७४
जनकपुर महाबिर चोकका २४ वर्षीय संजय मण्डल बिहान घरको काम सकेर ९ बजे टुकटुक (रिक्सा) लिएर बाहिरिएपछि साँझ ६ बजे घर फर्किदा खल्तिमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ कमाएर फर्किन्छन् । एसएलसी पढेर दुई वर्षसम्म कुनै काम नपाएर भौतारीएका संजयले तीन वर्ष यता मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै छन् ।
टयाक्टर आयातमा भ्याटले किसान मारमा
विनोद भण्डारी, कार्तिक ३, २०७४
सरकारले टयाक्टर आयातमा भ्याट लागू गरेसँगै कम्तीमा डेढ लाखसम्म मूल्य बढेपछि कृषि यन्त्रले खेती गर्ने किसान मारमा परेका छन् । भ्याट छुटमा आयात भएका टयाक्टर वास्तविक किसानको हातमा नपरी उद्योगी व्यवसायीको होल्डमा पुगेको भन्दै सरकारले यस वर्षदेखि टयाक्टर आयातमा भ्याट लागू गरेको हो ।
शाहीमान राई, कार्तिक ३, २०७४
यहाँ निर्माणाधीन दुई वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो मंसिरदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
यी हुन् एमालेका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार - १०:५३ PMअधिकांश दलको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण - ०८:४९ PMमनाइयो नेपाल संवत् ११३८, म्हपूजा गरियो - ०८:२४ PMथाई राजकुमारी लुम्बिनीमा (फोटोफिचर) - ०७:५८ PMअष्ट्रेलियामा तिहारको अलग रौनक - ०४:१८ PM‘बिट क्वाइन’ बाट अवैद्य आर्थिक धन्दा कसरी हुन्छ ? - ०४:१४ PMजनार्दनले सम्झिए लोडसेडिङ हटाउने दिनका घटना - ०३:४१ PM
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ३०, २०७४
संयोग नै भन्नुपर्छ । नेपालमा केहीअघि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश तीनै सर्वोच्च पदमा महिला थिए । अहिले राष्ट्रपति बहाल छन् । प्रधानन्यायाधीश केहीअघि निवर्तमान भइन् ।
‘सामूहिक लगानी, स्मार्ट एनआरएनए, एकेडेमी एजेन्डा’‘लाप्राक र एनआरएनए भवन मुख्य एजेन्डा’ राणाकालमा 'मृत स्थिरता’ थियो : जगदीश शमशेरमुटुरोगबाट ज्यान गुमाउने प्रमुख कारण अज्ञानता
मुगुमा तिहारको रौनक
राजबहादुर शाही, कार्तिक ३, २०७४
हिमाली जिल्ला मुगुमा तिहारको रौनकले छोएको छ । गमगढी बजारमा देउसी भैलो खेल्ने टिमहरुको चाप देखिएको छ । छिमेकी जिल्ला जुम्ला सिजा बाट भैलो खेल्न युवायुवती गमगढी बजार आएका छन् । तीन दिन देखि गमगढी बजार देउसीमय उल्लास बनेको छ ।
प्रदेश ३ : राजधानीमा बसेर ‘बिटकोइन’ धन्दाएउटै मञ्चबाट प्रवचनधरानमा बढ्दै साइकल मोहप्रदेश ६ : पिछडिएको क्षेत्र माग्दै आन्दोलन चेतावनी
यस्तो छ तिहारको योजना
तिहारमा नयाँनौलो खासै केही हुन्न मेरो । एक दिदी, बहिनी र भाइ छन् । उनीहरूसँगै रीतिरिवाज मनाउँछु । कहिले हामी दुई भाइ चेलीबेटीकहाँ जान्छौं, कहिले उनीहरू नै माइती आएर टीका लगाइदिन्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
सागरलाई पियानो र सुन उपहार
मञ्जु गुरुङ, कार्तिक ३, २०७४
नेपाल आइडलका टप फोर गयक सागर आलेलाई कोरियाबासी नेपालीहरूले लाखौ रुपैयाँ नगदका साथै पियानो र सुनको औंठीसमेत उपहार प्रदान गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
धनकुटाको चौबिसेमा मगर समुदायको लोकप्रिय हुर्रा नृत्य नाचिँदै । तिहारको समयमा नाचिने हुर्रा पूर्वी नेपालमा लोकप्रिय छ । तस्बिर : रमेश/कान्तिपुर
रमेशचन्द्र अधिकारी, कार्तिक ३, २०७४
गाउँबस्तीमा मगर समुदायको लोकप्रिय हुर्रा नाचले तिहारको स्वागत गरिसकेको छ । जिल्लाको मुढेबासबाट हुर्रा नाचको सुरुवात भएको मगर समुदायका अग्रजको दाबी छ । पूरा पढ्नुहोस्
राम्चे गाउँको तामाङ सेलो
गायक अमृत गुरुङ लोकभाका खोज्ने क्रममा ।
सजना बराल, कार्तिक ३, २०७४
गायक अमृत गुरुङ प्राय: घर बस्दैनन् । डुलिरहन्छन् । कहिले कार्यक्रमको लागि, कहिले घुम्न त कहिले गीत खोज्न हिँड्छन् । अरू कुरा मिले पनि गीतचाहिँ खोजेका बेला सँधै भेटैनन् । दुई/चार महिनै गाउँघर भौतारिँदा समेत एउटा भाका फेला नपरेको अनुभव उनीसँग प्रशस्तै छन् । पूरा पढ्नुहोस्
संस्कृति जोगाउन देउसीभैलो
नारायणी कला मन्दिरले आयोजना गरेको देउसीभैलो कार्यक्रममा नृत्य गर्दै कलाकार । तस्बिर : विमल खतिवडा/कान्तिपुर
विमल खतिवडा, कार्तिक ३, २०७४
पछिल्लो समय देउसीभैलो खेल्ने परम्परा लोप हुँदै गएको छ । पहिला मादलको तालमा भट्याउँदै देउसीभैलो खेल्ने गरिन्थ्यो । आशिक दिएपछि मादलको संगीतमा झ्याली मुजुरा बजाउँदै गीत गाएर नाच्ने चलन थियो । पूरा पढ्नुहोस्
दिल्लीमा देखाइयो ‘सेम्की ताम’
लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर भारतको नयाँदिल्लीमा तामाङ कथानक फिल्म ‘सेम्की ताम’ (मनको कुरा) देखाइएको छ । प्रिया तामाङको प्रस्तुति रहेको यो फिल्म ह्योल्मो पाँचपोखरी तामाङ् संस्थाले बिहीबार बिहान र दिउँसो गरी नयाँदिल्लीस्थित आरके पुरम ६ कम्युनिटी हलमा दुई सो देखाएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर संवाददाता , कार्तिक २, २०७४
सदाझैं यसपालि पनि तिहार विशेष गीत प्रशस्त निस्केका छन् । युट्युबमा ‘तिहार सङ २०७४’ टाइप गर्नासाथ गीतहरू हुरुरु स्क्रिनमा आउँछन् । छानी–छानी हेर्न/सुन्न सकिन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
भरतपुरमा सोमबार साँझ चितवन ग्रिन लियो क्लबले तिहारको अवसरमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाउँदै गायक सुरज थापा । तस्बिर : विमल खतिवडा/कान्तिपुर
विमल खतिवडा, कार्तिक २, २०७४
भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा अन्य दिनभन्दा भिन्न चहलपहल थियो । जब साँझ पर्दै गयो, तब हलमा तन्नेरीहरूको भीड बढदै गयो । पूरा पढ्नुहोस्
नेपालमा १८ वर्ष र त्यसभन्दा कम उमेरका बालबालिका र किशोर–किशोरीले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब ४२ प्रतिशत ओगट्छन् । पूरा पढ्नुहोस्
दैनिक ६ को मुटुको शल्यक्रिया‘थालासेमीया वारेमा’, पुस्तक सार्वजनिकजन्मनुअगावै रेटिना समस्याके हो रोजेसिया रोग ?
तिहारसँग सम्बन्धित कहिल्यै नबिर्सने तीन घटना
नवीन रायमाझी, कार्तिक १, २०७४
यमपञ्चकको सुरुवातसंगै अनेक किसिमका शुभकामना शन्देसका साथै दोश्रो ठुलो चाड तिहार शुरु भएको थाहा हुन्छ। मलाई यो चाड निकै मन पर्छ । खानामा मासुजन्य पदार्थ नहुने, चारैतिर झिलिमिली बत्ति बलेको र आफ्नो प्रियजनसँग मात्र भेट गरे हुने साथै छोटो अबधिको हुने भएकोले पनि मलाई यो पर्व प्रिय लाग्छ । दिप प्रज्वलित गर्ने कारणले दिपावली भनेको हुनुपर्नेमा आजभोली तिहारलाई दिपावली भनेर भारतीय करण भयो भन्ने जस्ता निरर्थक तर्क दिने महाबुज्रुकहरुको मानसिक अवस्थादेखि भने दया लाग्छ। पूरा पढ्नुहोस्
बंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपालबीचको यातायात सम्झौता संकटमाजति विदेश बसेपनि एनआरएनएहरुको व्यवहार उस्तै एनआरएनएमा उम्मेदवारी दिने जमुनाको घोषणा अस्ट्रेलियामा तरंग अमेरिका र नेपाल बस्ने आफन्तबीचको सम्बन्ध
सरकारी कार्यालय भवनको छाना खस्दा भारतमा आठ जनाको मृत्यु
रासस/सिन्हृवा, कार्तिक ३, २०७४
दक्षिणी भारतको तामिल नाडू राज्यमा अवस्थित यहाँको यातायात कार्यालय भवनको छाना खस्दा शुक्रबार बिहान आठ जनाको ज्यान गएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
क्याटालोनिया स्वतन्त्रता विवाद : शनिबारदेखि प्रत्यक्ष शासन
स्पेनी प्रधानमन्त्री मारियानो राखोय
बीबीसी, कार्तिक ३, २०७४
स्पेन सरकारले आगामी शनिबारदेखि क्याटालोनियाको स्वायत्तता निलम्बन गर्ने भएको छ । स्पेनी प्रधानमन्त्री मारियानो राखोयको कार्यालयले जनाएअनुसार संविधानको धारा १५५ क्रियाशील गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने जनाएको छ । १९७८ मा जारी स्पेनी संविधानको धारा १५५ मा संसद्ले केही संकट उत्पन्न भएको खण्डमा म्याड्रिडले कुनै पनि क्षेत्रको स्वायत्तता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पूरा पढ्नुहोस्
४३ अफगानी सेना मारिए
सिन्हवा, कार्तिक ३, २०७४
अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारको सैनिक पोस्टमा तालिवानले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा पनि ४३ सैनिक मारिएका छन् । दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तको मेयान्द जिल्लामा तालिवान हतियारधारीको आक्रमणमा दर्जनांै सैनिक घाइते भएको अधिकारीले बताएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
नाइजरमा एउटा सैन्य कारबाहीका क्रममा मारिएका सैनिककी आमाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टम्प संवदेनहीन भएको बताएकी छन् । श्रीमतीप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पले असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको बताइन् । पूरा पढ्नुहोस्
अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसन
अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव भएको जनाउँदै ‘भारतसँगको सहकार्य थप मजबुद पार्न अमेरिका इच्छुक’ रहेको बताएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
अमेरिकी कोरियाली सैन्य अभ्यासको उत्तर कोरियाद्वारा विरोध
रासस/सिन्ह्वा, कार्तिक २, २०७४
उत्तर कोरियाले संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सुरु गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोध गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
अस्ट्रेलियाको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक असफल
नारायण खड्का, कार्तिक २, २०७४
महत्वकांक्षी नीतिका रुपमा अस्ट्रेलियाको वर्तमान सरकारले ल्याएको परिवर्तित नागरिकता विधेयक यहाँको सिनेटमा असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलको सरकारले विधेयक आप्रवासीहरुलाई नागरिकता लिन कठिन बनाउने गरी ल्याएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
यात्रा प्रतिबन्धसम्बन्धी ट्रम्पको आदेशमा फेरि अदालतको अंकुश
रासस/एएफपी, कार्तिक १, २०७४
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न रोक लगाउने गरी घोषणा गर्नुभएको एक कानुनको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
एकै नाममा देवकोटाका दुई कृति
लीला लुइटेल, कार्तिक ३, २०७४
नेपाली साहित्यका अनेक विधामा शीर्षकको पुनरावृत्ति प्रशस्त मात्रामा भएको देखिन्छ । यसरी कुनै पनि लेखकका कृतिको शीर्षक अर्काे लेखकका कृतिको शीर्षकसँग मिल्नु अधिकांश स्थितिमा संयोग मान्न सकिन्छ, तर एउटै लेखकले एउटै शीर्षकमा दुईवटा कृति लेखेको स्थिति विरलै पाइन्छ । कसै–कसैले एउटै शीर्षकका दुई बेग्लाबेग्लै कृति लेखेको पाए पनि त्यो क्रमिक लेखन अर्थात् सिक्वेलका रूपमा आएको पाइन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
सिग्देलका दुई कृति१०८ औँ लक्ष्मी जयन्ती : देवकोटाले के दिए ?दुई स्रष्टालाई सयपत्री राष्ट्रिय सम्मानहेटौंडामा लक्ष्मी जन्मजयन्ती : लक्ष्मी स्मृति साहित्यिक पुरस्कार ढकाललाई
चिरन्जिबी अधिकारी, कार्तिक २, २०७४
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ६१ प्रतिशत नेपाली जनतासँग इन्टरनेट पहुँच छ । लगभग सबैजसो जनताले दूरसञ्चार सेवा लिएका छन् । डिजिटल डिभाइसहरुको प्रयोग पनि बढ्दो छ । दूरसञ्चार र इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढिरहँदा यसको दुरुपयोगका घटना पनि बढिरहेका छन् । यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको साइबर अपराध र यसले निम्त्याएको जटिलता हो । पूरा पढ्नुहोस्
तिहारको लागि नेपाल टेलिकमको बोनसभरतपुरमा विद्युतको अनलाइन भुक्तानी सेवासमस्यामा सामसङ, सीईओद्वारा राजीनामाचिनियाँ सपना : यस्तो बन्दै छ मानवनिर्मित द्विपमा ‘आधुनिक सहर’
-सुरज कुँवर, असार ३, २०७४
पेसागत सरकारी आँकडा अनुसार मुलुकमा सबैभन्दा धेरै किसान छन् । अर्थात कुल जनसंख्या २ करोड ८० लाखमध्ये ६६ प्रतिशत नेपालीको गुजारा कृषिकर्मबाट चल्छ । पूरा पढ्नुहोस्
प्रताप विष्ट, जेष्ठ २७, २०७४
अहिले गाडीले मान्छे बोक्छ, उहिले मान्छेले गाडी बोक्थे ! त्यसो त, उहिले पनि गाडीले नै मान्छे बोक्थ्यो । तर समयको यात्रा यस्तो थियो— त्यति बेला कति गन्तव्यसम्म तिनलाई मान्छेले नै बोकेर पुर्‍याउनुपर्थ्यो । अनि मात्र मान्छेहरू त्यसमा यात्रा गर्न पाउँथे । पूरा पढ्नुहोस्
एउटा विद्रोही, एउटा अ.त.
देवेन्द्र भट्टराई, कार्तिक ३, २०७४
खाडी मुलुक ओमानको मस्कटबाट पेमाले सोलुखुम्बु गाउँमा बस्ने आफ्नी दिदी निमालाई फोन गरेर भनी, ‘दिदी, यहाँ त असाध्यै गर्मी छ, कामको पनि चटारो । मलाई त घरको याद आइरहन्छ, हिमालको शीतल, रमाइलो फुर्सत । बरु त्यहाँ शान्तिमा भेडा चराएर बसेको जाती । यता त वरिपरि लडाइँ छ भन्छ, रातदिनको डर ।’ पूरा पढ्नुहोस्
तिहार विशेष : भाइ मसला र मिठाई तिहार विशेष : उज्यालोको पर्वतिहार विशेष : बैंकमा लक्ष्मीपूजाआगामी वर्षका लागि होटल बुकिङ
प्रताप विष्ट, आश्विन २९, २०७४
मकवानपुरमा बाख्रापालक कृषक र संस्थाहरूले ‘स्विमिङपुल’ (डिपिङ ट्याक) बनाउन थालेका छन् । जिल्लामा २० वटा स्विमिङपुल बनिसकेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
८४ वर्षे उमेरमा पनि कटुवालचीनद्वारा ‘विश्वकै अग्लो’ विद्युत खम्वाको निर्माण गर्दैजुम्ल्याहा बच्चाका फरक-फरक पिता !लामखुट्टे मारेपछि एक जापानी ट्वीटरमा प्रतिबन्धित
थाई राजकुमारी लुम्बिनीमा (फोटोफिचर)
मनोज पौडेल, कार्तिक ३, २०७४
थाई राजकुमारी महा चक्री सिरिन्धोर्नले शुक्रवार बुद्धजन्म स्थल लुम्बिनी भ्रमण गरेकी छन् । उनले मायादेवी मन्दिरमा पुजाआजा गरिन् । त्यस्तै मन्दिरस्थित अशोक स्तम्भमा पनि पुजाआजा गरिन् । पुष्करणी पोखरीमा विश्व शान्ति र विकासका लागि प्रार्थना गरिन् । उनलाई नेपाल र भारतका थाई धर्मदूत फ्रा बोधी विडसेले पुजाआजा गराएका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
शान्तिकलीको पहिलो भाइटीका !
शब्द/तस्बिरः जनक नेपाल, कार्तिक ३, २०७४
एक वर्षअघि बाँके राष्ट्रिय निकुन्जमा सरुवा भएर आएकी शान्तिकलीले स्थानीयसँग सम्बन्ध बढाएकी छिन् । भाईटीकाको उपलक्ष्यमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, निकुन्ज र गाउँपालिका अध्यक्षले ७२ वर्षीया हात्ति शान्तिकलीसँग ‘दिदी–भाईको’ नाता गाँसेका छन् । अब उनी निकुन्जकी ‘जेष्ठ हात्ति’ मात्र हैन, स्थानीय अधिकारीहरुकी ‘दिदी’ पनि भएकी छिन् । पूरा पढ्नुहोस्
झिलिमिली उपत्यका (फोटोहरु)
तिहारलाई झिलिमिली पर्वको रुपमा पनि लिइन्छ । सभासुग्घर र झिलिमिली भएको स्थानमा लक्ष्मीले बास गर्ने विश्वासअनुसार लक्ष्मीपूजाको दिन हरेक घर सक्नेजति सफा र झिलिमिली बनाइन्छ । यो दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि चुनौतिको दिन पनि हो । पूरा पढ्नुहोस्
तस्बिर : इलिट जोशी, कार्तिक २, २०७४
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन बिहीबार साँझ देशभर धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदैछ । लक्ष्मी पूजाको दिन घर, पसल झिलिमिलि पार्न फूलमाला व्यापार सहरबजारमा अरु दिनको तुलनामा धेरै हुने गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
तराईमा तिहारको झकिझकाउ [फोटोफिचर]
सन्तोष सिंह, जितेन्द्र साहकार्तिक २, २०७४
कात्तिक कृष्ण औंसीका दिन बिहीबार देशभर धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा तथा आराधना गरी दिपावली मनाइँदै छ । यसै क्रममा जनकपुरको जानकी मन्दिर आसपास बजारमा प्रसाद खरिद गर्नेको बिहानैदेखि भीड लागेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटको बारेमा थाहा नपाउने सायदै होलान् । कत्तिले त प्रत्यक्ष घुमघाम गरिसकेको हुनुपर्छ । जहाँ सगरमाथा र अन्य हिमशृंखलाको मनोरम दृश्य हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लाग्ने गर्दछ । पूरा पढ्नुहोस्
'सभा' जस्तै म्यादी आवेदकको भीड [फोटोफिचर]
सन्तोष सिंह, आश्विन २९, २०७४
जनकपुरस्थित निधि स्मृति भवनमा युवाहरु खचाखच भरिएको छ । बिहान ७ बजेदेखि नै आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन जम्मा भएको दृश्यले बेरोजगारको उजागर गरेको छ । आश्विन २७ र २८ गते दुई दिनमा १० हजार ५ सय जनाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दर्ता गराएका छन् । आइतबार आवेदन दर्ता जारी छ । पूरा पढ्नुहोस्
शब्द/तस्बिरः जनक नेपाल
जितेन्द्र साह, जितेन्द्र साह,
कला– संस्कृतिका सेतु एक पुस्ताको अन्त्य स्टार संगीना भुइँमान्छेबारे लेखिएको अग्लो किताब
बेबी क्यान आई होल्ड यु
फाइभ जीनेपाली रोडमा अस्ट्रेलियन हन्टरस्पर्स स्टारविन्डोज फोनको अवसान
मखमली सँगै हुर्कंदा...
भाइटीका ल्यामडग रेसशरद आयो तिहारको रौनक